🥇 ukubalwa kwama-credit broker
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 277
Ividiyo yokubalwa kwemali yabathengisi bezikweletu
Oda ukubalwa kwemali kwabadayisa izikweletu
Izinhlangano zezikweletu zihlinzeka ngezinsizakalo ezahlukahlukene ezihlobene nokwenziwa kwezibambiso. Basebenza ngezinsizakalo eziqondile nezabaxhumanisi. Ngosizo lwesoftware yanamuhla, ungasetha noma imuphi umsebenzi webhizinisi. Abadayisi bezikweletu babalwa ngokwemithetho ethile, ebalulwe emithethweni yezindikimba zombuso, kanye nasemibhalweni yangaphakathi yenkampani.
I-USU Software isiza ukugcina amarekhodi amaklayenti wabathengi bama-credit futhi yenza ukubalwa kwemali ngokuqhubekayo ngokulandelana kwesikhathi. Akukho msebenzi ozophuthelwa. Zonke izinkomba zamakhasimende zirekhodwe esitatimendeni esisodwa esihlanganisiwe. Ngakho-ke, kwakhiwa isisekelo esivamile. Abadayisi bezikweletu badlala indima ebalulekile ekusebenzisaneni phakathi kwalowo obolekayo kanye nefemu. Basiza ukwenza imisebenzi ngokungabikho kwesikhathi samahhala noma ukungabi nalwazi embonini.
Ngokusebenza kwe-accounting, ungalandelela umthwalo womnyango ngamunye kanye nomsebenzi. Abantu abaphendulayo bakhonjwa ngenxa ye-logbook. Ngobuholi benhlangano, kuyadingeka ukuthola imininingwane enembile nethembekile ngaphambi kokwenza inqubomgomo yokugqugquzela nentuthuko. Ukuhambisana nemigomo yemiyalo yangaphakathi kunikeza isiqinisekiso esinjalo.
Umthengisi wesikweletu ngumuntu okhethekile okwaziyo ukuzimela enze izinqumo egameni leklayenti. Okokuqala, kwenziwa isivumelwano, esichaza izingqinamba ezijwayelekile zokusebenzisana nabantu besithathu. Ngenxa yokuthuthukiswa kobuchwepheshe bolwazi, inkampani ingakwazi ukwenza umsebenzi wayo ngezindlela eziningi. Ukunciphisa izindleko zesikhathi nokwandisa ukutholakala kwezindawo zokukhiqiza kusiza ukukhulisa umkhiqizo. Ukwakhiwa kwezimo zokusebenza ezinhle zabasebenzi kuthinta intshisekelo yabo ekuhambeni kwamakhasimende.
I-USU Software yadalelwa ukwenza imisebenzi yebhizinisi emikhakheni ehlukahlukene yezomnotho nokuqinisekisa ukubalwa kwayo kwemali. Isakhiwo sawo siqukethe izincwadi ezahlukahlukene zezikhombo kanye nezihlukanisi ongazichazela zona. Amapharamitha athuthukile asiza ukusetha ukuhlolwa nokusetshenziswa ngokuya ngama-athikili wokufakwa. Ukusebenza okuphezulu kuqinisekisa ukwakheka kwentambo esheshayo. Umbiko ngamunye uhlinzeka ngokuhlaziya okuthuthukile kwamathothali amaklayenti, ama-broker, izimpahla ezihleliwe, nokuningi.
I-akhawunti yabathengisi bezikweletu kuhlelo olukhethekile inikela ekulawuleni okuphelele kuzo zonke izinqubo zokukhiqiza. Ngakho-ke, ungalandelela umthwalo wabasebenzi nezinga lokukhiqiza. Ekupheleni kokuhamba, inani lifingqiwe, futhi idatha idluliselwa eshidini elifingqiwe. Amaspredishithi akhiwe ngemigqa eminingi namakholomu agcwele idatha enikeziwe. Ngama-templates akhelwe ngaphakathi, ungazenzela inkontileka namanye amafomu e-accounting.
I-USU Software ingumsizi omuhle kumphathi. Iyakwazi ukuhlinzeka ngokushesha imibiko kuzo zonke izigaba, ikhiqize imibiko yokubalwa kwemali nezentela, ilandelele okwenziwa ngabasebenzi, inqume izinga lokukhokha nokukhokhwa kwezikweletu, iqaphe ukutholakala nokufunwa, futhi isize nokwenza ngcono ukusebenza kwebhizinisi.
Eminyakeni ye-Big Data, kukhona ukuhamba kwedatha okukhulu, okufanele kuhlolisiswe kahle futhi kubhekwe phakathi nezinqubo ezenziwa ngumthengisi wesikweletu. Ngakho-ke, kubalulekile ukuhlela umsebenzi wezinkampani zesikweletu ngokuya ngezidingo zamakhasimende, uzihehe futhi wandise izinga labo lokuthembeka. Okuwukuphela kwesixazululo isoftware yesimanje - uhlelo lokuzenzekelayo lwamakhompiyutha, olukwazi ukwenza kangcono umsebenzi walo lonke ibhizinisi lesikweletu, okuvumela abadayisi ukuthi benze ngaphandle kwephutha elilodwa. Ukuyiqinisekisa, kudingeka uhlelo olusezingeni eliphakeme lwe-accounting, oluzosiza yonke inqubo, kwandise ukusebenza kahle kwenkampani. I-USU Software ihlinzeka ngamathuba anjalo wokuxhasa umsebenzi wabathengisi bezikweletu. Enye yalezi zakhiwo ukwakheka kwemibhalo nokubalwa kwezimali, kufaka phakathi amafomu nezinkontileka, ukude, online, ngosizo loxhumano lwe-Intanethi.
Kuwo wonke amabhizinisi, into ebaluleke kakhulu ukubalwa kwezimali, ikakhulukazi ezinkampanini zezikweletu, njengoba umsebenzi wayo uhlobene ngqo nokuthengiselana kwezezimali futhi nephutha elincane nje lingadala ukulahleka okukhulu kwemali. Ngakho-ke, uhlelo lokubalwa kwezimali nokubika kufanele lube sezingeni eliphezulu, lunikeze imibiko engenamaphutha, okufanele isetshenziselwe ukubikezela nokuhlela inkomba yentuthuko yesikhathi esizayo yabathengisi bezikweletu. Ngosizo lwe-accounting system yabathengi bama-credit, lokhu ngeke kube yinkinga ngoba zonke lezi zinqubo zenziwa ohlelweni lwekhompyutha, ngaphandle kokungenelela komuntu.
Kunezinye izinzuzo eziningi zohlelo njengokungena nge-login ne-password, i-interface elula, imenyu enhle, izinguquko nganoma yisiphi isikhathi, i-database ye-elekthronikhi, ukwakheka okungenamkhawulo kwamaqembu ezinto, ukukhonjwa kwemali ekhokhwa sekwedlule isikhathi, ukubalwa kwemali okwenziwayo nokuhlaziya, ukuphathwa kweholo kanye nabasebenzi , ukubalwa kwamanani wenzalo, ukwenziwa kwamapulani namasheduli, ukulawulwa kwemali, ukulayishwa nokulayishwa kwesitatimende sasebhange, izitifiketi zokubalwa kwezimali, amafomu okubika okuqinile, ama-waybills, ukuthumela okuningi nge-SMS noma i-imeyili, ukuthola izicelo nge-Intanethi, imibiko ekhethekile, izincwadi, nomagazini, ukuhlaziywa kwemali engenayo nezindleko, ukunikezelwa kokufunwa nokufunwa, ukulandelwa kokusebenza kwabasebenzi, ama-akhawunti atholakalayo futhi akhokhwayo, asetshenziswa kunoma yimuphi umkhakha wezomnotho, ukuhlolwa kwezinga lesevisi, impendulo, umsizi owakhelwe ngaphakathi, ama-invoyisi, ukuguquguquka kwemisebenzi, inqubo ezenzakalelayo, izibalo ezithuthukisiwe , ukwanda komkhiqizo wezindawo zokukhiqiza, ubumbano lwamakhasimende, insizakalo yokubhekwa kwamavidiyo, ukuzimisela komzila wezezimali isimo se-ion nesimo sezezimali, izitatimende zokubuyisana nabalingani, isibali sokubala semalimboleko esakhelwe ngaphakathi, ikhalenda yokukhiqiza, ukubalwa kwezindleko, ukuxhumana kweViber, ukudala ikhophi yokusekelayo, ukudlulisa imininingwane kusuka kolunye uhlelo, ubuphathi beminyango, nokuxhumana kwemisebenzi neminyango.